Ahoana ny fomba hampihenana ny fanjifana angona ao amin'ny iOS 9 | Vaovao IPhone
Ahoana ny fomba hampihenana ny fanjifana angona ao amin'ny iOS 9
Alejandro Cabrera | | iOS 9, Fampianarana sy torolàlana
Hatramin'ny nanombohan'ny drafitra "famindrana angona tsy voafetra" dia maro amintsika no tsy mandinika ny fanjifana angon-drakitra mandritra ny volana, fa rehefa tonga kosa ny volavolan-dalàna ataon'ny orinasa dia tsy ampoizina isika satria ny ankamaroan'ny drafitra dia manana fetran'ny angon-drakitra izay ampitaintsika, "fanjifana fanampiny" dia manomboka aloa. Miaraka amin'ireo fanovana vaovao ao amin'ny iOS 9 dia betsaka ny fitarainana momba ny fampiasana angona finday avo lenta. Raha izany no zava-misy aminao, dia manana vitsivitsy izahay torohevitra azonao ampiasaina hampihenana be ny fanjifana angona findainao amin'ny iPhone-nao.
1 Vonoy ny fampiasana angona finday ho an'ny iCloud.
2 Atsaharo ny fampidinana mandeha ho azy amin'ny angona finday ao amin'ny iTunes Store sy App Store.
3 Atsaharo ny Wi-Fi Assistant.
4 Ferana ny fampiasana angona finday ho an'ny rindranasa sasany.
5 Atsaharo ny fanavaozam-baovao.
6 Aza miala amin'ny mozika avo lenta.
7 Aza mampiasa data data finday tanteraka.
Vonoy ny fampiasana angona finday ho an'ny iCloud.
Raha mampiasa iCloud hiasa amin'ny fitaovana samihafa ianao dia mety hitarika ho amin'ny fihinanana angona mahazatra kokoa izany. Raha miasa amin'ny antontan-taratasy Pejy ianao dia hampiasa angona finday mandritra ny fampiasana. Ireo fanovana sy fanovana rehetra ireo dia voatahiry ao anaty rahona ary hampiasa angona ianao mandritra io dingana io. Mba hamonoana ny fampiasana angona finday ao amin'ny iCloud araho ny dingana manaraka:
manokatra Fikirana ary miditra iCloud.
Mandrosoa eo iCloud Drive.
Ao amin'ny efijery manaraka, mikorisa mankany ambany ary eo amin'ny farany ambany dia tokony hamono anao «Mampiasà angona finday".
Rehefa tsy mandeha ity fampiasa ity, Tsy hampiasa angona finday intsony ny iCloud handefasana antontan-taratasy na data, izay hamonjy tahiry finday be mpampiasa.
Atsaharo ny fampidinana mandeha ho azy amin'ny angona finday ao amin'ny iTunes Store sy App Store.
Ny fisintomana ny fanavaozana ny rindranasa ao amin'ny fitaovanao dia mety hiteraka fandaniam-bola mavesatra. Raha hampidina ireo fanavaozana mandeha ho azy ireo ianao dia aleonao ihany mifandray amin'ny tamba-jotra Wi-Fi alohan'ny hisintomana sy hanavaozana ny fampiharana anao, satria, ny sasany manana habe be dia be.
En Fikirana mahita Fivarotana iTunes sy App Store.
Ao amin'ity fizarana ity fikarohana «Mampiasà angona finday«. Atsaharo ity safidy ity dia afaka mandeha ianao.
Atsaharo ny Wi-Fi Assistant.
Ny fanohanan'ny Wi-Fi dia mety manimba ihany, satria mety hanampy koa izany. Rehefa manandrana manome famantarana Wi-Fi malemy ianao dia manomboka mampiasa angona finday ny fanampiana Wi-Fi manampy amin'ny asa ratsy. Na dia tsy manampy aza izany dia mety hampiasa angona finday marobe ianao nefa tsy fantatrao. To disable this feature:
manokatra Fikirana ary tsindrio eo Data momba ny finday.
Mikorisa hatramin'ny farany ary eo amin'ny farany ambany dia tsy maintsy esorinao ilay Fanohanana Wi-Fi.
Raha nitombo ny fanjifana angon-drakitra, noho ianao mampiasa tambajotra Wi-Fi, dia mety ho ny fanohanan'ny Wi-Fi no olana.
Ferana ny fampiasana angona finday ho an'ny rindranasa sasany.
Misy ny rindranasa sasany izay ampiasaina mihoatra ny hafa. Ny sasany amin'ireo rindranasa ireo dia tsy mihinana angona mihintsy, ary ny sasany kosa mihinana. Tsara ho fantatra foana izay apps mandany data, ary ny tena zava-dehibe, raha mila manana fidirana amin'ny angona finday ireo rindranasa ireo.
Mandehana any Fikirana ary miditra Data momba ny finday.
Rehefa tafiditra ao anatiny dia mihodina mandra-pahitanao ilay lisitry ny fampiharana.
Atombohy ny fampandehanana ny fampiasana angona finday ho an'ireo rindranasa hitanao fa ilaina.
Atsaharo ny fanavaozam-baovao.
Fetsy tena mahazatra io mitahiry angona finday. Ny fampiharana dia afaka manavao ny fampahalalana any aoriana, raha tsy mampiasa azy ireo ianao ary mazava ho azy fa mandany data. Ity safidy ity dia azo kilemaina ary tsy misy fiantraikany amin'ny fampiasana sy ny fifandraisana amin'ny iPhone.
Mandehana any Fikirana -> General ary tsindrio eo Vaovao farany ao aoriana.
Atsaharo izao ilay fiasa eo an-tampony. Ny fangatahana dia hiova avy maintso ho fotsy.
Azonao atao ny mahita ny lisitry ny rindranasa izay misy fanavaozana ny mombamomba azy eto ambany ny safidy kilemaina.
Io safidy io dia tsy mandeha amin'ny ankapobeny vonjeo ny bateria, saingy miasa amin'ny fitsitsiana angona finday koa.
Aza miala amin'ny mozika avo lenta.
Apple dia namorona safidy hihainoana mozika avo lenta, na inona na inona Wi-Fi na tambajotra finday ampiasainao. Mazava ho azy, ny avo kokoa ny kalitao, ny lehibe kokoa ny rakitra. Arakaraka ny maha lehibe ny fisie no ilaina kokoa ny data mba handefasana. Noho izany, raha mampiasa Apple Music ianao ary te-hihary amin'ny angon-drakitra dia tokony ajanona io safidy io.
manokatra Fikirana ary mandehana amin'ny safidy mozika.
Mitadiava ary alefaso ny safidy Kalitao avo lenta miaraka amin'ny angona finday.
Raha tena te-hialana amin'ny fampiasana angona finday ianao dia afaka manao izany koa vonoy ny safidy fampiasana angona finday. Noho io safidy io tsy mandeha dia tsy hampiasa afa-tsy ny Apple Music amin'ny alàlan'ny Wi-fi ny iPhone.
Ny famonoana kalitao avo lenta no safidy tsara indrindra ho an'ireo izay te-hihaino mozika amin'ny alàlan'ny angon-drakitra finday, saingy tsy mila fanjifàna tafahoatra ho an'ireo rakitra be. Raha Pandora na Spotify no ampiasainao dia azonao antoka fa tambajotra Wi-Fi ihany no ampiasainy.
Aza mampiasa data data finday tanteraka.
Ho vahaolana farany, azonao atao vonoy tanteraka ny angon-drakitra finday. Raha eo amin'ny fetranao isam-bolana amin'ny Gigas ianao hampiasaina ary tsy te-handoa fanampiny, dia ity no safidy voalohany ampiasaina.
Mandeha Fikirana -> Data momba ny finday.
Vonoy ny safidy Data momba ny finday.
Ireo no sasany amin'ny tsara indrindra Torohevitra hampihenana ny fampiasana finday avo lenta amin'ny fitaovanao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 9 » Ahoana ny fomba hampihenana ny fanjifana angona ao amin'ny iOS 9
Ny bera firavaka dia hoy izy:
Hitako fa tsy mampino fa tsy nisy naneho hevitra momba ny tsy fahombiazan'ny bateria amin'ny iphone 6s sy 6s plus. Miakatra tsara ny telefaona. Saingy matetika, aorian'ny famerenam-bola na dia antsasak'adiny aza dia tsy manavao ny mari-pamantarana bateria. Na manavao 2 na 3%. Raha mamono ny terminal ianao ary miverina indray dia efa miseho ny bateria marina. Toa tsy fahombiazana lehibe tokoa ny fahitako azy iray amin'ny lafiny fototra amin'ny finday. Niova ny finday 3 ary mitohy ny olana, ary namboarina ho vaovao na miaraka amin'ny famerenana amin'ny laoniny. Tena tsy faly aho. Ireo glitches tsy azo eritreretina amin'ny paoma ireo. Etsy ambony fotsiny mba hitsapana raha olana backup dia azoko izany.
Nilalao aho nanamboatra azy io ho toy ny vaovao ary ankehitriny ny nomaniny ho solon'izay teo aloha very aho tamin'izay rehetra tafiditra ao. Ao amin'ity forum apel ity dia mitaraina ny olona, ​​ary maro no mitaraina momba ny olana. Ary tsy haiko intsony na rindrambaiko na fitaovana io satria toa tany amin'ny taona 6 ihany. Toa mahamenatra ahy ny tsy fahombiazana lehibe tamin'ny finday 900 euro
Valiny amin'ny The jiosy jiosy
Toy izany koa no mitranga amiko amin'ny 6 ...
Ny Orsa jiosy dia hoy izy:
Eny, izany amin'ny lafiny iray dia manome toky ahy indray, satria ho olana momba ny rindrambaiko izany fa tsy ho sarotra, izay ahafahana mamaha amin'ny fanavaozana azy, saingy toa diky lehibe izany. Matetika izany dia mitranga amin'ny iPhone mihidy. Miaraka amin'ny efijery dia manavao ny famantarana ny fiampangana. Fa ilay teo aloha indray, ary rehefa mamerina azy indray, tampoka dia niakatra 20% ny bateria
Etsy ankilany, tampoka teo, isaky ny mandrehitra azy aho dia mangataka ahy hanamarina ilay apple id (zavatra mbola tsy nitranga tamiko tao anatin'ny 5 taona). Ary maharary ny hatoka. Misy vahaolana ve?
Darwin figueroa dia hoy izy:
ATAON'NY FARAN'IZAO REHETRA TSARA IZAO AZA MAMPIASA NY IPHONE
Valiny tamin'i Darwin Figueroa
Tohizo amin'ny Samsung grungy anao amin'ny android ... Ilay maniry fa tsy afaka
Alberto ch dia hoy izy:
Tsy tsapan'i Parsley fa Android dia avo arivo heny mihoatra ny iOS, izay azo ampiharina kokoa ary voavaha ny zava-drehetra raha toa ka tsy maintsy manome baiko an'arivony ity programa asshole ity. IOS dia programa ho an'ireo tsy salama saina, sao tsy fantatrao.
Mamaly an'i Alberto ch
Fanontaniana apetrakao foana amin'ny tenanao rehefa mamaky trano